बैशाखबाट ‘को बन्छ करोडपती’ : सन्दिप लामिछाने ब्राण्ड एम्बेसडर, कसरी सहभागी हुने ? - Purbeli News
बैशाखबाट ‘को बन्छ करोडपती’ : सन्दिप लामिछाने ब्राण्ड एम्बेसडर, कसरी सहभागी हुने ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, फाल्गुण ०८, २०७४ समय: १९:४०:४४
ईटहरी/ नेपालमा पनि पछिल्लो समय उच्च क्वालिटिको टेलिभिजन कार्यक्रमहरुले नेपालिहरुलाई लालायित बनाउन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाईज शोहरु नेपाल भित्रीने कार्य नेपाल आईडल बाट सुरु भयो भने हाल यस्ता फ्रेन्चाईजहरु संचालनको लागि धुमधाम संग तयारी भैरहेको छ । यस्तैमा एपिवान टेलिभिजनले ‘को बन्छ करोडपती’ नामक टेलिभिजन रियालिटी गेमिङ शो को सुरुवात गर्दैछ ।
एपिवानले अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाईज शो नेपाल आईडल सके लगत्तै ‘बुगिविगि’ शो गरिरहेको छ भने ‘नेपाल आईडल’ सिजन २ को पनि तयारी गरिरहेको छ । यस्तैमा ‘को बन्छ करोडपती’ को पनि प्रचारप्रसारलाई पनि सुरुवात गरेको छ । महानायक राजेश हमाल सहित सामाजिक संजालमा यो शोको पेज पनि बनेको छ । यस अर्थमा राजेश ‘को बन्छ करोडपती’ को होस्टको रुपमा रहनेछन् ।
‘को बन्छ करोडपति’ ब्रिटेनको चर्चित टेलिभिजन शो ‘हु वान्ट्स टु वि ए मिलेनियर’ बाट लाइसेन्स प्राप्त गर्दै नेपाली सस्करणको रुपमा एपिवान टेलिभिजनले प्रसारण गर्दैछ । उक्त शोको लागि ब्राण्ड एम्बेसडर पनि नियुक्त गरिएको छ । नेपालका चर्चित क्रीकेट खेलाडी ‘सन्दिप लामिछाने’ लाई ‘को बन्छ करोडपती’ को ब्राण्ड एम्बेसडरको रुपमा नियुक्ति गरिएको हो । यो शोलाई बैशाख १ गतेबाट एपिवान टेलिभिजनमा प्रसारण गरिनेछ ।
यो शोलाई एसारबीएन मिडियाले सहप्रायोजन गरेको छ भने यसको लागि छिट्टै दर्ता खुल्नेछ । दर्ता भएकाहरु आइभिआर र एसएमएसद्वारा छानिने र तीमध्ये १० जना प्रतियोगी फस्टेस्ट फिंगरको लागि चुनिनेछन् । यसरी चुनिएका १० जना कार्यक्रममा सहभागी भएर हट सिटको लागि प्रतिष्पर्धामा उत्रीनेछन । तीमध्ये छिटो उत्तर मिलाउने एक जना हट सिटमा पुग्नेछन् । कार्यक्रममा लाइफलाइन, अडियन्स पोल, फिप्टी फिप्टी लगायतका अप्सन हुनेछ ।